Yazisa lokho onakho: ngabe kufanele kwenziwe
Izindaba neNhlangano, Ifilosofi
Mhlawumbe wonke umuntu uyazi le nkulumo - uyazisa lokho onakho. Kodwa ingabe bonke bazama ukwenza lokhu? Abaningi, ngokuphambene nalokho, bavame ukukhononda ngempilo yabo futhi bacabangele lokho abanakho, isimo esinganele sokuphila okujabulisayo. Akukhona nje ngezinto ezibonakalayo, kodwa futhi ngezingane, impilo, ithalenta, ukusebenza kahle nezinye izinto ezingenakuzwa.
Kungcono ukulungiselela kusengaphambili
"Unayo - awujabuli, ulahlekelwa, ukhale" - ukuthi lokhu kuvela kaningi kangakanani. Njengoba ufunde ngokuhlangenwe nakho kwabanye, kubonakala sengathi kubalulekile ukuthi ucabange futhi wakhe impilo yakho ngendlela yokuthi awuzisoli ngokuntuleka kwalokhu ngenxa yokuqiniseka kwakho. Kodwa ngokuvamile ngokuvamile konke kuvela ngokuhlukile. Isibonelo, impilo yomuntu. Lapho ubusha, kubonakala sengathi indawo yokugcina amandla emzimbeni ayinakuphela. Kodwa ngaphezu kweminyaka bazinikela ngokwabo noma ezinye izinkinga zempilo. Njengoba wazi, abantu abakwazi lokho abanakho, ngakho baqala ukugxila ngabo kuphela ngemva kokuba kwenzeka okuthile okwenzekayo. Isibonelo, uma udokotela exwayisa isiguli ukuthi uma engashiyi ukubhema, inhliziyo yakhe ingase ingayisekeli umthwalo, uyaqhubeka enza kanjalo aze afike esibhedlela ngesifo senhliziyo. Futhi uma umuntu engakwazi ukuphulukisa, uqala ukuphila ngendlela enempilo, ukuzivikela ngentshiseko nakwabanye emiphumeleni eyingozi yegwayi. Kodwa lokhu akusasekho ubukhona obugcwele, njengokungathi, lapho bephilile, bekungeke kube khona. Kunemikhawulo eminingi, into engasenakuyenza, lapho ehlupheke kakhulu. Kungakanani umuntu okwenzeka kulokhu okuhlangenwe nakho ngenxa yokungalaleli kwakhe. Akusizo ngalutho abathi "bayakwazisa lokho onakho."
Ukuphela kokulahlekelwa okuthile, uqala ukuqonda ukuthi kubaluleke kangakanani futhi kubiza. Uma ngabe kukhona noma othile ehlala eseduze, khona-ke umuntu uyeka ukuqaphela lokhu futhi aqale ukufuna into entsha futhi engatholakali. Ngokombono wakhe, lokhu kuyoba yilokho engenakho injabulo. Ngakho-ke, abantu bayashiya, baphume emndenini, baye eminye imizi, bathathe imali yokuthenga imali ukuze bathenge izinto ezintsha. Kodwa ekugcineni kuvela ukuthi umyeni noma umkami omdala wayengekho okubi kakhulu, izinkinga ziphakama, impahla ayikho emfashini futhi ayisekho injabulo, noma ayikho ithuba lokubuyisela imali ebolekiwe futhi kungaba ngcono uma i-smartphone endala, esebenze ngokuphelele.
Izibonelo zabanye abantu ziyadingeka
"Sizazisa lokho onakho," mhlawumbe ngalawa magama umqondo wenjabulo. Uma umuntu ejabule ngalokho anakho, usejabule kakade. Ungakwazi ukufunda ukuzithokozisa wena, lokho onakho, isibalo sakho, ingqondo yakho, inhloso yakho? Kungenzeka ukuthi lokhu kuzosiza izibonelo zabanye abantu abazobhekana nokulahlekelwa futhi bafinyelele esiphethweni sokuthi udinga ukuqonda lokho onakho. Isibonelo, abaningi bakhononda ngabazali babo. Abanye abantu abacebile ngokwanele, abanye banamahloni wokuziphatha kwabo noma bacabange ukuthi banciphile. Kodwa kufanele sikhumbule ukuthi bangaki abantwana emakhaya abantwana abaphupha ukuba nomama nobaba. Akungabazeki ukuthi bahlola isimo ngendlela ehlukile futhi bacabange ngokuba khona kwabazali, hhayi ngalokho abakhona.
Umdanso unamacala amabili
Ngokungangabazeki, umama nobaba abanothando banikeza ingane konke abanakho. Ungabheka lo mbuzo ngamehlo kubazali abangenayo izingane. Ngokuvamile, labo abanabo, abajabuli ngokuziphatha kwabo, amamaki esikoleni, umsebenzi okhethiwe noma umngane wokuphila. Kodwa labo abafika enqandanini baphupha kuphela into eyodwa, ukuthi banezingane zabo. Kubalulekile ukuba banikeze omunye uthando lwabo, konke okunye akunandaba. Kodwa ngesikhathi esifanayo, umbuzo uvela, kodwa ingabe bayakwazisa ingane yabo yokuthoma ngaphezu kwabazali bangempela? Ngokungaqiniseki akunakwenzeka ukuyiphendula, kodwa kucacile kuphela ukuthi kuyoba yinto ebaluleke kakhulu kubo kunabo abenqabayo futhi bayiphenduka ibe yindawo yokuhlala.
Ngezinye izikhathi akufanelekile inkinga
Ngokuvamile, esikhundleni sokududuza esimweni esinzima, ungazwa inkulumo ethi "uyazisa lokho onakho." Kulokhu, yiqiniso, kukhona iqiniso neqiniso lokuphila. Kodwa ngakolunye uhlangothi, kufanele zonke zilinganiswe ngokwanele ukwesaba ukulahlekelwa. Ingabe ukuthuthukiswa komphakathi kuyomisa, uma wonke umuntu eyokwaneliseka kuphela ngalokho anakho. Yiqiniso, lokhu kubhekisela ngaphezulu kokuqukethwe kunezinto ezingokomoya. Nakuba kungcono ukuthuthukisa ubuntu bomuntu futhi uzame ukuzithuthukisa ngokwakho kunokuzibeka emingceleni ethile futhi ucabange ukuthi kufanele usebenzise kuphela labo, isibonelo, amakhono engqondo onawo kusukela ekuqaleni. Okuhlangenwe nakho kubonisa ukuthi, uma ufisa nokukhuthazela, umuntu ufinyelela ezingeni elisha lokuthuthukiswa kwengqondo futhi ngaleyo ndlela uthuthukise ukuqhubeka komuntu. Futhi, akudingeki ngaso sonke isikhathi ukwanelisekile ngesibalo sakho, ukungalungi okuqedwa kalula, ukuthatha imidlalo noma ukusebenzisa ukudla okungenabungozi, okuzokwenza nokwandisa ukuzethemba, ngakho-ke, kuyoba nemiphumela emihle kumuntu.
Futhi ekugcineni, uma abantu beneliseka ngokuthi kwakudingeka baphathe amanzi emfuleni noma umthombo ngamabhakede, funda emigodini, ugibele amahhashi, upheke kuhhavini, khona-ke isintu asike sakha i-ugesi, amanzi asebenzayo noma ahamba emkhathini. Kulesi simo, awukwazi ukusho ukuthi unakho, ungathokozi, ulahlekelwa, uyakhala.
Awu, lo Mkhulu Omkhulu, noma Zingaki izindlela zokulondoloza imali wazi ostap Bender
Ezenhlalakahle kanye nemvelo kumuntu. Ifilosofi: inkinga yokuhlanganiswa kwezinto eziphilayo kanye nezenhlalakahle kumuntu
Umqondo wokuba. Izinhlobo eziyisisekelo zokuba
Isiphi isihloko esifanele kakhulu sokukhuluma nomfana ocingweni?
A elula isaladi recipe ne uphayinaphu kanye crab izinti
Izidakamizwa "Flucostat" futhi "fluconazole": uyini umehluko? Ingabe kukhona umehluko phakathi "Flucostat" futhi "fluconazole"?
Imithi elwa namagciwane Effective stomatitis ezinganeni
Yeka Hack tin yasekuqaleni kakhulu futhi elula ku ukubulawa?
Visa e-England ngokuzimela: indlela yokuhlela?
Ukwenza imipheme Wezingane enkulisa ngezandla kwazo ehlobo (izithombe)
Lamasiko ku Cover ngomshado: ukubuyekezwa, isiko